IEကိုအသုံးပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုမယ်လို့ထင်တာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်..။ IE အတွက်တော်တော်လေးကို အထောက်အကူပြုပါတယ်..။ သူမှာပါတဲ့ Features တွေကိုအောက်မှာဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်..။
ဒီထက်ပိုပြီးလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ http://ie7pro.com/ မှာသွားရောက်ပေးပါ..။ အဲ့ဒီမှာဘဲတခါတည်း ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်ပါကြောင်း..။
Posted by AZURE at 6/27/20070comments
ကျွန်တော်တို့ ၀တ်နေတဲ့ တီရှပ်လေးတစ်ထည်ကို ခဏလေးနဲ့မြန်မြန်လေးခေါက်ကြည့်ရအောင်ပါ..။
မိုး တွေရွာရင်....... ဆိုတာလေး ကို ဘယ်လိုရေးရမလဲစဉ်းစားနေတာတော်တော်လေးကိုကြာသွားတယ်...။ကျွန်တော့်မှာ အရေးအသားနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ တော်တော်လေး ကိုအားနည်း တာကြောင့်ပါ..။
မိုးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တော့ လူတိုင်းခံစားဖူးကြမှာပါ..။ကျွန်တော်ကတော့ မိုးရွာရင်တော်တော်လေးကိုသဘောကျပါတယ်..။ဟိုး ငယ်ငယ်တုန်း ကတော့ မိုးရွာရင်...မိုးရွာထဲမှာ ဘော်လုံးကန်တာ ကိုတော်တော်သဘောကျတယ်..။ နောက်ပြီးတော့...မိုးရွာထဲမှာ ထီးမပါပဲ လျှောက်သွားရတာကို တော်တော်လေး ကြိုက်ပါတယ်..။
မိုး ရာသီ ကိုကြိုက်တယ်လည်း မဟုတ်..၊မကြိုက်ဘူးလည်း မဟုတ်ပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် မိုးရာသီ ဆိုတာလေး ကတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအတွက် Essential Rain ပါ..။ ဒီ လုံးလေးကတော့ စာရေးဆရာမ ဂျူး ရဲ့ စာအုပ်နာမည်လေးတစ်ခုပါ..။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက အဲ့ဒီ့ စာအုပ်လေးကိုဖတ်ဖူး ခဲ့တာပါ..။ Essential ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေး ကိုသဘောကျခဲ့ တာ ပါ..။ အဲ့ဒါ က မိုး နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အခုခေါင်းထဲ မှာပေါ် လာတာလေး ကို ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပါ..။
နောက်ထပ် ပေါ်လာတာ ကတော့ မိုးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ် ပါ..။ ကျွန်တော် ၈-တန်းလောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်..။ ဇော်ဝင်းထွဋ် ရဲ့ ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာ ကို Pre-Recorded (ပရီစနစ် ဆိုပြီး မြန်မာ မှာစထုတ်တုန်း က) ဆိုပြီးထွက်လာ တော့ ကျွန်တော်အခန်းလေးထဲမှာ နားထောင်ရင်း မူယာမာယာမိုး ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး ကို သွားသဘောကျမိပါတယ်..။ အဲ့ဒီ့ သီချင်းလေး က အခု အချိန်မှာ ကျွန်တော့် အတွက်တော်တော်လေး ကို သွား တိုက်ဆိုင်နေသလားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်..။
မိုးအကြောင်း ရေးရမှာ တခြားအကြောင်းတွေနွယ်သွားပါတယ်..။ ကျွန်တော်က တော့ မိုးရွာရင်.... ပျော်တတ်ပါတယ်..။ ၅နှစ်တာ ကျောင်းနေ တုန်း ကဆိုရင် မိုး ကိုတော်တော်လေး ကိုမျှော်ပါတယ်..။ မိုးရွာ ရင်စာအုပ်လေးဖတ်နေ ရတာ ကိုအခုအချိန်အထိ မမေ့သေးပါဘူး.။ ကျွန်တော် ကို ကိုတီဇက်အမ် က တတ် တာ နဲ့ မရေးတတ် ရေးတတ် နဲ့ ရေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော့မှာ မိုး နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ အမှတ်တရ တွေ သိပ်မရှိတာလည်းပါ ပါတယ်..။
Posted by AZURE at 6/25/20070comments
ရီမိတဲ့ Blaugh က ပုံလေးတချို့ပါ..။
အခုလောလောဆယ်သုံးနေ တဲ့ font တွေ ကို နည်းနည်းလေးငြီးငွေ့လာတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က လင့်ခ်လေးတွေမှာ သွားရောက်သုံးကြည့် လို့ရပါတယ်..။
Posted by AZURE at 6/24/20070comments
ဘလောခ့် ပို့စ်များကို Backup လုပ်ခြင်း
အရင်တခါတုန်း က ကိုဘုရင့်နောင် ကတင်ဖူးတယ်..။ An easy way to backup your blog ဆိုတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုပါ..။ အခု တစ်ခါ မှာ လည်း ကျွန်တော် လိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခု သွားတွေ့ပါတယ်..။ မိမိရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေးတွေ ကို မိမိရဲ့စက်ထဲမှာ ပြန်သိမ်းထားချင်တဲ့အခါမှာတော့ ဆော့ဖ်ဝဲ လေးတစ်ခု ကို သုံးပြီးတော့ သိမ်းလို့ ရပြီဆိုတာကိုတွေ့လိုက်တာပါ..။ မိမိ ရဲ့ post လေးတစ်ခုထည်းကို ကွက်ပြီး တော့ backup လုပ်လို့ရသလို..၊ blog per file အနေ နဲ့ လည်းပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်..။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တောင် မိမိစရေးထားစဉ် ကတည်းက ပို့စ်အားလုံး ကိုလည်းလုပ်နီုင်ပါတယ်..။ သူ့ နောက်ထွက်လာမယ့်version ကတစ်ခါတည်းကို pdf အနေ နဲ့ တောင်တန်းလုပ်ပြီးတော့ သိမ်းထားလို့ တောင်ရပြီ လို့ ကို ပြော ထားပါတယ်..။ အခုလောလောဆယ် သုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ codeplex.com/bloggerbackup မှာသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်..။ အဲ့ဒီမှာ ပဲတစ်ခါတည်း Blogger Backup Utility ကို ဒေါင်းလုတ် လုပ်နိုင်ပါတယ်..။
Labels: Sharing, tips and tricks
ဖုန် ခါ ခြင်း
မရေးပဲပစ်ထားတဲ့ဘလော့ခ်လေးကိုဖုန်ပြန်ခါလိုက်တယ်..။ တော်တော်လေးကိုပစ်ထားလိုက်တာ ကို တွေ့လိုက်ရတယ်..။ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ဘလော့ခ်ကိုသာမတင်ဖြစ်တာပါ..၊တခြားဘလော့တွေ ကိုတော့လိုက်ဖတ်ဖြစ်တာတော့ရှိ တယ်လေ..။ကျွန်တော့် ကို တတ်(Tag) ထားတဲ့ ကိုတီဇက်အမ် ပြောတဲ့ မိုးတွေရွာရင် ..... ဆိုတာလေးကိုလည်းရေးရဦးမယ်ဆိုတာကိုသွားသတိရတယ်..။အခုလောလောဆယ်.ဖုန်အရင်ခါလိုက်တာပါ..။
ကျွန်တော်တွေ့လာတဲ့ blog slogans လေးတွေပါ..။သဘောကျလို့တင်ထားလိုက်ရပါတယ်..။
အခုရက်ပိုင်းမှာ ဘလော့ခ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပို့စ်တင်ဖို့ စိတ်ကလည်းမပါတာနဲ့ လိုက်ပဲဖတ်နေမိတယ်..။ ဖတ်နေကျ ဘလော့ခ်လေးတွေကို တော့ရောက်ဖြစ်ပါတယ်..။စာမေးပွဲ လည်းမြန်မြန်ပြီး မှ ကိုကောင်းမှာပါလေ..။နို့မို့ဆို ခေါင်းထဲမှာ အဲ့ဒီ့စာမေးပွဲကြီး ကခံနေလေရောလေ..။ စာမေးပွဲ တွေပြီးသွားရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကိုဆက်စဉ်းစားရဦးမှာပါလား လို့ဆက်ပြီးတော့ တွေးမိပါသေးတယ်…။ အများတကာလိုလည်းကဗျာတွေ ..၊စာတွေကလည်းမရေးတတ်…၊အတွေးတွေထွက်ဖို့ ကလည်းဘာမှကိုမရှိတော့ လည်းခက်သားဗျာ။
သေချာတာတစ်ခုကတော့ ပေါက်တတ်ကရမဟုတ်တဲ့ပို့စ်လေးတွေကိုတော့တင်ဖြစ်နေမယ်လို့တော့ ယုံကြည်ပါတယ်..။
Posted by AZURE at 6/20/20070comments
ကျွန်တော် တစ်ခါတစ်လေ အပြင်သွားဖြစ်ရင် ဟိုရိုက်ဒီရိုက်လုပ်လာတာလေးတွေကိုတင်ပါတယ်..
ကျွန်တော့်အခန်း ကနေရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးပါ…။
Posted by AZURE at 6/20/2007 1 comments
Sometimes life is hard, but we should never stop trying until the very last breath! Take this as an example.
Posted by AZURE at 6/16/2007 1 comments
သင် ဘယ်လိုလူမျိူး လဲ??
်လူ ဆို တာက ကိုယ် ဘယ်လိုလူ မျိုးလဲ ဆို တာကို သိချင်တတ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် ...။ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီ မယ့်သူ ဆို တာ ကို ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်..။ အဲ့ဒါလေးတွေ ကို စိတ် ၀င်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက် က လင့်ခ်လေးတွေ မှာသွားကြည့် လိုက် ပါ လို့ ပြော ချင်ပါတယ်..။ သူမေးထားတာ လေးတွေ ကို ပုံလေးတွေ ကိုသေသေချာချာ စဉ်းစားပြီးမှဖြေတာ ပိုကောင်းမယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်..။
Posted by AZURE at 6/16/20070comments
Labels: inspiration, တွေး မိ တွေး ရာ လေး များ
စမ်းသပ်ခြင်း (Windows Live Writer)
အခုကျွန်တော်စမ်းသပ်ချင်တာကတော့ windows live writer နဲ့ blogger မှာပို့စ်အသစ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...။ဘယ်လိုပေါ်မယ်ဆိုတာကတော့မသိသေးပါဘူး..။သူ့ကိုတော့တော်တော်လေးကို
အောက်က link လေးတွေမှာသွားကြည့် လို့ရပါတယ်..။
Posted by AZURE at 6/15/20070comments
Labels: Knowledge, Sharing, tips and tricks